Monday December 09, 2019 - 19:35:07 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horraysay ayay dowladda Xabashida Itoobiya ka hadashay tirada ciidamadeeda duullaanka ku jooga dalka Soomaaliya.
Meles Alemo waa safiirka Itoobiya ee Kenya
Qiraal mar la arag ah ayaa kasoo baxay mas'uul Itoobiyaan ah inkastoo uusan si dhab ah u sheegin tirada ciidamada gummeysiga Itoobiya uga sugan Soomaaliya hadane wuxuu carrab dhabay in tobanaan kun askari ay uga qeyb qaadanayaan duullaanka dowladaha shisheeye ku qaadeen shacabka Soomaaliyeed.
Meles Alem oo ah safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya magaalada Nairobi ayaa wargeyska The Star ee Kenya kasoo baxa u sheegay in ciidamo gaaraya 9000 illaa 15,000 askari ay uga suganyihiin Soomaaliya ayna qeyb ka yihiin dagaalka loogu magac daray "Al Xarbu Calal Irhaab".
Mas'uulkan Itoobiyaanka ah wuxuu sheegay in ciidamadooda duullaanka ku jooga Soomaaliya ay qeyb ka yihiin howlgalka AMISOM balse sheegashadiisa ayaa khilaafsan warbixinno horay ugasoo baxay Ururka Midowga Afrika oo sheegayay in ciidan dhan Afar kun iyo boqolaal Itoobiyaan ah ay Soomaaliya ku suganyihiin.
Ciidamada gummeysiga Itoobiya ee duullaanka ku jooga Soomaaliya ayaa la rameysanyahay in ay ka badanyihiin 30 kun oo askari kuwaas oo shaatiga AMISOM ku qabsaday dalka, ciidamadan badankood waxay ku sugan gobollada,Baay,Bakool iyo Gedo.
Sidoo kale ciidamo kumanaan Xabashi ah ayaa ku sugan gobollada Hiiraan,Galguduud iyo Jubbaa Hoose, Xoogaga Al Shabaab ayaa ku guuleystay in ciidamada Itoobiya ay ku naafeeyaan dagaalka dalka ka socda waxayna ku qasbeen in ay iskusoo oodaan xeryahooda kadibna ay saadka isugu gudbiyaan diyaarado ay Q.Midoobay leedahay.